Faa'iidooyinka iyo ka-hor-imaadyada biyo-biyoodka -I- | Cusbooneysiinta Cagaaran
Faa'iidooyinka iyo ka hor-imaadyada biyo-biyoodka -I-
Soo food saartay saboolnimada kala duwanaanta bay'ada badda, maxaa diidaya in loo beero beero-dhaqashada? Inta badan salmon-yada laga ganacsado Jarmalka waxay ka yimaadaan aquaculture. Si kastaba ha noqotee, dhaqankani wuxuu leeyahay cillado daran, kuwa wax soosaara ayaa badanaa aada daroogada biyahana waxay ku wasakhoobaan qashinka dabiiciga ah. In kasta oo ay jiraan wax walba, khubarada qaarkood ayaa laga dhaadhiciyay in beeraha biyo-dhaqashada aysan kaliya noqon doonin hab lagu ilaaliyo badaha, laakiin sidoo kale hab lagu nafaqeeyo dadka. dadweynaha dunida si joogto ah u kordhaya.
1 Ilaha borotiinka
2 Labadii kaluun midkood wuxuu ka yimaadaa dhul-beereedka
3 Dhaqan sii kordheysa oo ay u cambaareynayaan aqoonyahannada deegaanka
In quudinta aadanaha, kalluunka ayaa ah isha ugu horeysa ee laga helo borotiinka, digaaga iyo hilibka doofaarka. Xaqiiqdii, maanta waxay u oggolaaneysaa 17% bani-aadamka inay daboolaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah baahiyaha borotiinka. 10 ama 15 sano gudahood, dalabku wuxuu ku labanlaabmi doonaa 2. Biyo la'aan biyo-dhaqameed, suurtagal maaha in laga jawaabo baahi borotiin tirada dadka oo sii kordheysa. Biyo-dhaqashada ayaa runtii aad uga faa'iido badan doofaarka ama lo'da, maxaa yeelay kalluunka iyo noolaha kale ee badda waxay quudiyaan wax ka yar kalluunka. xayawaanka dalka.
Si loo soo saaro kiilo ka mid ah hilibka lo'da tusaale ahaan, waxay ku qaadataa 15 jeer cunto ka badan soo saarista kiilo karab ah. Kalluunka dhab ahaantii wuxuu cunaa tamar ka yar kalluunka. xayawaanka dalka, Tanina waa laba sababood. Dhinaca kale, waa xayawaan dhiig qabow, heer kulka gudaha wuxuu si fiican ula jaan qaadayaa deegaanka ay ku nool yihiin. Dhinaca kale, u guurista jawiga biyaha waxay u baahan tahay dadaal yar.
Labadii kaluun midkood wuxuu ka yimaadaa dhul-beereedka
Sida laga soo xigtay Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Cunnada iyo Beeraha, kala badh kalluunka maanta saxankayaga ku sameeya ma aha kalluunka duurjoogta ah. Si kastaba ha noqotee, muhiimadda ay leedahay aquaculture waxay ku kala duwan yihiin wadanba wadan. Bartamaha Yurub, sida Jarmalka, kalluunka duurjoogta ayaa ah kuwa loogu doon doonista badan yahay. Si kastaba ha noqotee, Shiinaha, dhul-beereedka waa dhaqan kun sano jirsaday oo ku abtirsada bilowgii kalluunka. teendhooyin. Ilaa maanta, Shiinaha shaki la'aan waa waddanka ugu horreeya kaabahan, oo bixiya ku dhowaad saddex-meelood meel wadarta wax soo saarka kalluunka adduunka. aquaculture.
Dhaqan sii kordheysa oo ay u cambaareynayaan aqoonyahannada deegaanka
Sida halkandhaqanka Waxay horumarisaa, soo jiidataa dhaleecayn intaa ka sii badan oo ka timaadda khubarada deegaanka, maxaa yeelay waxay sii kordhisay dhibaatada kalluumeysiga halkii laga xallin lahaa. Runtii, noocyada ugaarsiga badankood waa kuwo hilib cun ah, oo waxay quudiyaan noocyada kale ee lagu kalluumaysto dhexdhexaad dabiiciga ah. Beeraha kalluunka ee loo yaqaan 'Aquaculture Tuna' waa masiibada ugu badan, maxaa yeelay si ka duwan sida loo yaqaan 'salmon', noocyadan kuma soo saari karaan maxaabiis ahaan. Sidaa darteed beeralaydu waxay soo qabtaan tunas duurjoogta ah oo ay ku quudiyaan kalluun qaali ah lagu qabtay badda. Waxaa lagu xiray baqashada, tunasku fursad uma lahan inay soo saaraan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Ecology » Beeraha deegaanka » Faa'iidooyinka iyo ka hor-imaadyada biyo-biyoodka -I-
80% biyaha ceelasha Shiinaha waa kuwo wasaqeysan oo aan la cabi karin
Tigers waxay ku dhawaaqeen inay ka dhammaadeen Kambodiya